Weebly: Inoshamisa Inoshamisa Siti Kubata uye CMS | Martech Zone
Weebly: Inoshamisa Inoshamisa Siti Kubata uye CMS
Chitatu, Kurume 31, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Shamwari yangu Jenni paakandiudza kuti shamwari yakawirirana yakataura naye kuti atange webhusaiti naye Weebly, yemahara yekutambira sevhisi uye zvemukati manejimendi sisitimu (CMS), ndakamupa chaizvo nguva yakaoma. Ini ndaingoziva kuti ndaizomuka ndichishanda husiku hwese kuti ndiite Nice saiti iyo yaakagadzirirwa iye neRight On Inbox, a email kubiridzira agency.
Chiitiko na Weebly chaive chakapesana! Ini ndakakwanisa kuteedzera nekunamatira iyo HTML neCSS, kushandisa Weebly's nyore kutsiva tambo (semuenzaniso, zvemukati zvinoiswa ne %% CONTENT %%), uye kurodha mafaera kuburikidza neyakareruka mushandisi interface.
Izvo zvemukati kurongedza ndeye Rongedza Munzvimbo style system - chimwe chinhu chinofanirwa kuitiswa zvese zvemukati manejimendi Ndokunge, iyo inokutendera iwe kuti ugadzirise mune mamiriro eiyo peji kuti iwe ugone kunyatsoona kuti rinotaridzika sei. Iko hakuna kudikanwa kwekutarisa kana kuenda kumashure uye mberi nekugadziriswa. Iye wekusimudza mifananidzo akatoisa mifananidzo inoenderana nesaiti uye akachengeta iwo mamwe mazita emifananidzo, saka ini handina kana kumbofanira kugadzirisa zvimwe.
Mhedzisiro yacho inoshamisa. Ini ndakakwanisa kuvaka saiti yakagadzirirwa zvine hunyanzvi mune maminetsi makumi matatu kana zvakadaro. Ndiri chaizvo! Uye nesarudzo hombe yezvakafanogadzirirwa madingindira, mafomu, zvakadzamidzirwa midhiya uye zvemukati sarudzo, haufanire kunge uri nyanzvi yekuvaka yako webhusaiti. Kune zvekare pro account dzinowanikwa nedzimwe sarudzo dzekuwedzera (uye kubvisa Weebly tsoka tsoka).
Tora Kutarira Indy muoni uye kusaina yavo tsamba!
Tags: indy muoniweebly
OpinionLab Analytics Kubatanidza uye Kuyedza
Nei Usinga kwanise Kungoteedzera Amazon.com
Apr 1, 2010 pa 7: 35 AM
Saiti inotaridzika kushamisa! Handina kumbobvira ndaziva kuti Weebly aikwanisa kuita mibairo yakadaro yekutarisisa… kunyangwe, ini handina kumbotsauka kupfuura matemplate akapihwa
Apr 1, 2010 pa 8: 02 AM
Ndinofara kukupa imwe blog furu pamwe nekushaikwa kwangu kwehunyanzvi hunyanzvi! Ndatenda zvakare nerubatsiro rwako!
Apr 1, 2010 pa 7: 21 PM
Ndinofara kunzwa Weebly akashanda zvakanaka kwauri! Tinogona kuve vanofara kupfuura kunzwa chero mhinduro yauinayo
Sep 28, 2011 pa 9: 31 AM
pane nzira yekuchinja pakati pekodhi uye dhizaini pazvinhu zvakatoiswa papeji?
Sep 28, 2011 na3: 24 PM
Ehe, ivo vane Nice yakapusa yekumisikidza munzvimbo mashandiro. Haisi chinhu chakaomesesa, asi chakanakira kupora kune saiti yekutanga.